ပုရိသေတွ ရဲ့ ရင်ခုန်သံကို မြန်သွား စေမယ့် အိန်ဂျယ်ကို ရဲ့ ဆက်ဆီ ကျတဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်များ – GaMone Media
Homepage / Celebrity / ပုရိသေတွ ရဲ့ ရင်ခုန်သံကို မြန်သွား စေမယ့် အိန်ဂျယ်ကို ရဲ့ ဆက်ဆီ ကျတဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်များ
ပုရိသေတွ ရဲ့ ရင်ခုန်သံကို မြန်သွား စေမယ့် အိန်ဂျယ်ကို ရဲ့ ဆက်ဆီ ကျတဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်များ
မြင်သူတိုင်း ငေးလောက် တဲ့ အမိုက် စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက် ကြောင်း အလှ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ တက်သစ်စ မော်ဒယ် လ် အိန်ဂျယ်ကို ကိုသိ ကြမယ် ထင်ပါ တယ်နော် ။ မော်ဒယ်လ် လောကကို ဝင်ရောက်တာ မကြာသေး ပေမယ့် ပရိသတ် အမျာ းအပြားရဲ့ အားပေး ဝန်းရံမှုကို တဖြည်းဖြည်း ရရှိလာတဲ့ မော်ဒယ်လ် ဖြစ် ပါ တယ် ယောကျာ်း လေး ပရိသတ် တွေရဲ့ ဝန်းရံ အား ပေး မှုရ ရှိ ထား တဲ့ သူမ က တော့ ဆိုရှယ် media လောက မှာ နာမည် တစ်လုံး နဲ့ ရပ်တည် နေသူ တစ် ယောက်လည်း ဖြစ် ပါ တယ် ။
သူမ ရဲ့ ဆက်ဆီ ကျပြီး အမိုက် စား ပုံတွေ နဲ့ ညို့ အား ပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင် နိုင် သူလေး ဖြစ်တာ ကြောင့် လက် ရှိ ဖေ့ဘွတ်စာ မျက်နှာ မှာ ရေပန်းစား လူကြိုက် များကာ ပုရိသ တွေ ဝန်းရံ နေကြတာ လည်းဖြစ် ပါတယ် ။ သူမ ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်တွေ ကို လူမှု ကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ် ပေါ်တွင် အများ ဆုံး တင်လေ့ ရှိ တာတွေ့ ရပါ တယ် ။
ပုံလေး တွေတိုင်း မှာ မော်ဒယ်လ် အိန်ဂျယ်ကို တစ်ယောက် ဆွဲဆောင် မှု ရှိရှိ နဲ့ လန်းလွန်း နေတာ လည်းဖြစ် ပါတယ် ။ သူမ က တော့ အလန်းစား ရိုက်ထား တဲ့ ပုံလေး ကို တင်ပေး လာတာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်၊ ၊ မော်ဒယ်လ် အိန်ဂျယ်ကို ရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေး တွေကို ပရိတ်သတ် တွေ အတွက် ပြန် လည် မျှဝေ ပေး လိုက်တယ် နော် … .
ျမင္သူတိုင္း ေငးေလာက္ တဲ့ အမိုက္ စား ခႏၶာကိုယ္ ေကာက္ ေၾကာင္း အလွ ကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတဲ့ တက္သစ္စ ေမာ္ဒယ္ လ္ အိန္ဂ်ယ္ကို ကိုသိ ၾကမယ္ ထင္ပါ တယ္ေနာ္ ။ ေမာ္ဒယ္လ္ ေလာကကို ဝင္ေရာက္တာ မၾကာေသး ေပမယ့္ ပရိသတ္ အမ်ာ းအျပားရဲ႕ အားေပး ဝန္းရံမႈကို တျဖည္းျဖည္း ရရွိလာတဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ ျဖစ္ ပါ တယ္ ေယာက်ာ္း ေလး ပရိသတ္ ေတြရဲ႕ ဝန္းရံ အား ေပး မႈရ ရွိ ထား တဲ့ သူမ က ေတာ့ ဆိုရွယ္ media ေလာက မွာ နာမည္ တစ္လုံးနဲ႔ ရပ္တည္ ေနသူ တစ္ ေယာက္လည္း ျဖစ္ ပါ တယ္ ။
သူမ ရဲ႕ ဆက္ဆီ က်ၿပီး အမိုက္ စား ပုံေတြ နဲ႔ ညိဳ႕ အား ျပင္းျပင္း ဆြဲေဆာင္ ႏိုင္ သူေလး ျဖစ္တာ ေၾကာင့္ လက္ ရွိ ေဖ့ဘြတ္စာ မ်က္ႏွာ မွာ ေရပန္းစား လူႀကိဳက္ မ်ားကာ ပုရိသ ေတြ ဝန္းရံ ေနၾကတာ လည္းျဖစ္ ပါတယ္ ။ သူမ ရဲ႕ အမိုက္စား ပုံရိပ္ေတြ ကို လူမႈ ကြန္ယက္ ေဖ့ဘြတ္ ေပၚတြင္ အမ်ား ဆုံး တင္ေလ့ ရွိ တာေတြ႕ ရပါ တယ္ ။
ပုံေလး ေတြတိုင္း မွာ ေမာ္ဒယ္လ္ အိန္ဂ်ယ္ကို တစ္ေယာက္ ဆြဲေဆာင္ မႈ ရွိရွိ နဲ႔ လန္းလြန္း ေနတာ လည္းျဖစ္ ပါတယ္ ။ သူမ က ေတာ့ အလန္းစား ႐ိုက္ထား တဲ့ ပုံေလး ကို တင္ေပး လာတာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္၊ ၊ ေမာ္ဒယ္လ္ အိန္ဂ်ယ္ကို ရဲ႕ အလွ ပုံရိပ္ေလး ေတြကို ပရိတ္သတ္ ေတြ အတြက္ ျပန္လည္ မွ်ေဝ ေပး လိုက္တယ္ ေနာ္ … .
Previous post ဖြူဖွေးဝင်းမွတ် တဲ့ အလှတရား တွေ ကရူးခါသွား ရလောက်အောင် စွဲလမ်းမက်မော ချင်စရာကောင်း လွန်း နေ တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် ရဲ့ Video လေး
Next post အမိုက်စား အလှတွေ ပေါ်လွင် နေပြီး ညှို့အား ပြင်းပြင်း နဲ့ ဖမ်းစား ထားတဲ့ သွန်းဆက် ရဲ့ ဗီဒီယို